Siyaabaha Xariifnimada leh ee YouTube-ka loogu Isticmaalo Suuqgeynta ahaan - YTpals
Adigoo ka faa'iidaysanaya ka-qaybgalka iyo beddelka awoodda nuxurka fiidyowga, waxaad ku daah-furi kartaa suurtogalnimada suuq-geyneed ee baaxadda leh ee YouTube-ka. Ahaanshaha mashiinka raadinta labaad ee ugu weyn, madal-wadaaga fiidyaha ee Google-ku leeyahay ayaa kaa caawin karta inaad abuurto summado soo koraya waqtiyada soo socda. Istaraatiijiyad suuqgeyneed oo si wanaagsan loo qeexay YouTube, waxaad soo bandhigi kartaa summadaada ka hor in ka badan 2 bilyan oo qof oo aad tallaabooyin badan ka horreyso tartamayaashaada.
Si kastaba ha ahaatee, suuq-geynta YouTube-ku xaqiiqdii maaha qayb keeg ah, gaar ahaan haddii aad kaliya u tallaabsanayso biyaha cusub ee suuq-geynta muuqaalka. Abuuritaanka, socodsiinta, iyo lacag ka samaynta kanaalka YouTube waxay noqon kartaa mid faa'iido badan leh, laakiin waxaad u baahan tahay inaad ogaato siyaabo caqli badan oo aad uga heli karto faa'iidooyinka ugu sarreeya ee suuqgeynta YouTube. Haddii aad dareento dareen la'aan, aan ku soo qaadno qaar ka mid ah siyaabahan halkan:
1. Wanaaji macluumaadkaaga fiidyaha
Hal dariiqo oo hubaal ah oo sida ugu wanaagsan looga heli karo suuqgeynta YouTube waa in la daryeelo xoogaa farsamo. U wanaaji fiidyowyadaada si aad u hesho muuqaal dheeri ah oo ku saabsan goobta adiga oo abuuraya cinwaano fiidiyoow ah oo soo jiidanaya—kuwa dadka ku dhiirigaliya inay gujiyaan macluumaadkaaga. Tixgalinta muhiimka ah ee wanaajinta cinwaannada fiidyaha waa adeegsiga ereyada muhiimka ah ee saxda ah—ereyada raadinta ee isticmaalayaashu ay raadinayaan—ciwaanka fiidyaha iyo sharraxaadda fiidiyowga. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la sameeyo cinwaanno gaagaaban oo leh ugu badnaan 60 xaraf. Cinwaanka fiidyowgaaga iyo sharraxaaddaadu waa inay ahaadaan kuwo qallafsan oo cad waana inay daawadayaasha siiyaan sabab ay u daawadaan macluumaadkaaga.
2. Habbee sawirka thumbnails
Marka laga soo tago cinwaannada fiidyaha iyo sharraxaadda fiidyowga, thumbnail-ka waxa ku jira fiidyowgaaga ayaa saamayn weyn ku leh heerka gujin-ku-riixidda (CTR). Khubarada suuqgeynta YouTube waxay xooga saarayaan mar iyo marba in fiidiyowyadu ay lahaadaan sawir-gacmeedyo wax ku ool ah si loo dejiyo oo loo caddeeyo rajada daawadayaasha. Sawir-gacmeedka sawir-gacmeedkaagu waa inuu kiciyaa xiisaha daawadayaashaada, iyaga oo ka buuxinaya yaab waxa ku xiga fiidyahaaga. Waxaad isticmaali kartaa Photoshop ama qalab-fiidyaha habaynta si aad u habayso sawir-gacmeedkaaga. Marka sawir-gacmeedka fiidyahaagu ay kiciyaan shucuur oo ay sheegaan sheeko, waxa ku jira fiidyowgaagu waxay u badan tahay inay helaan aragtiyo cajiib ah.
3. Ku dheji dhererka ku habboon
Talada xigta ee loo isticmaalo YouTube goob suuqgeyneed ahaan waxay noqonaysaa in la hagaajiyo dhererka waxa ku jira fiidyowgaaga. Raadinta ka-qaybgalka sare, khubarada suuqgeynta YouTube waxay diiradda saaraan wadarta wakhtiga daawashada fiidiyowyadooda. Fikrad ahaan, muddada waxa ku jira fiidyowgaagu waa in aanay ka badnayn 5 daqiiqo. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay kuxirantahay nooca iyo nooca macluumaadka aad daabacayso. Iyadoo aanu jirin xeer adag oo degdeg ah, waxaad tijaabin kartaa dhererka fiidyaha si aad u gaadho heer uu kanaalkaagu wado ka qaybgalka ugu badan. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad diirada saartaa abuurista muuqaalo tayo sare leh oo aad ka dhigto kuwo xog badan, gaaban, oo xiiso leh.
4. U tag bulsho
Xayeysiinta-madax-bannaanidu waxay si xooggan u caawin kartaa istaraatiijiyadaada suuqgeyneed ee YouTube. Si aad sare ugu qaaddo gaadhista kanaalkaaga YouTube, waa inaad joogtaa meelaha ay ugu firfircoon yihiin. Hadafku waa in la hormariyo waxa ku jira fiidyowga iyaga ka hor. Waxa aad tan ku samayn kartaa adigoo dhexda u galaya shabakadaha warbaahinta bulshada ee kala duwan - ha noqoto Facebook, Twitter, Instagram, ama LinkedIn. Suuqgeeyayaasha savvy waxay yaqaanaan qiimaha bulshooyinka warbaahinta bulshada iyo kooxaha ee adduunka suuq geynta ee maanta. Kuwani waa meelaha uu kanaalkaaga YouTube ka heli karo soo jiidasho badan. Haddii aad fiidiyowyadaada ku wadaagto kanaaladan, waxa hubaal ah inaad balaadhi doonto gaadhistaada oo aad kanaalkaaga ka dhigi doonto mid darajo sare leh.
Qodobbada aan soo sheegnay ayaa ah dhowr siyaabood oo badan oo aad ku mari karto suuqgeyn YouTube oo aad daaha ka qaadi karto awoodda dakhli-abuurista ee baaxadda leh ee goobta. Waa muhiim inaad si halabuur leh u fikirto markaad fulinayso talooyinkan. Hadii aad rabto iibso YouTube jecel, macaamiisha, iyo faallooyinka, waxaad dooran kartaa YTpals, madal kobcin karta kanaalkaaga YouTube.
Siyaabaha Xariifnimada leh ee loogu Isticmaalo YouTube-ka sidii Goob Suuq-geyneed waxaa qoray YTpals Writers, 16 May 2022
Siyaabaha 3 Waxaad U Kordhin Kartaa Muuqaalkaaga YouTube-ka
Iyada oo YouTube si joogto ah u ilaalinaysa xaaladdeeda iyada oo ah mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee suuqgeynta internetka maanta, wax qarsoodi ah maaha in adeegsiga fiidiyowyada suuqgeynta internetka ay ugu fiican tahay ganacsiga. Iyada oo loo marayo "ka baxsan…
Waa maxay Maxay Suuqgeegu U Arkaan Inay Ka Fikaraan Sameynta Fiidiyeyaasha Fidinta ee YouTube-ka?
Markii la bilaabay 2005, YouTube wuxuu ahaa uun madal fiidiyoow ah. Laakiin maanta, 15 sano ka dib, barxadda ayaa ah tan ugu sarreysa suuq geynta fiidiyowga. Waxay leedahay in ka badan 2 milyan oo isticmaale, waxayna hoy u tahay…
Sidee loo Hagaajiyaa tayada Fiidiyahaaga YouTube-ka?
Maanta, markasta oo aad ka fikirto inaad hesho casharro dhakhso leh, oo si fudud loo raaco, iyo macluumaad wax ku ool ah, waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhacayaa waa YouTube, saw maaha? Taasi waa laga yaabaa inay tahay sababta ay 2 bilyan oo qof u galaan barnaamijka fiidiyaha…